Programmer ကောင်း တစ်ယောက်က language မ ရွေး ဘူး
ကျွန်တော် ရဲ. အယူအဆ သက်သက် ဖြစ် ပါတယ် Myanmar IT Pros အားလုံး နဲ. သူငယ်ချင်းအားလုံး ကို ပါ ၀င်ဆွေးနွေး ဖို.ဖိတ်ခေါ် ပါတယ်။ Added by Kyaw Ko Ko Thet on June 29, 2009 at 4:00am —
Heros and Developers
ကျွန်တော် Game အသည်းအသန်ဆော့တဲ့အချိန်(၂၀၀၃ ၀န်းကျင်) တုန်းက နာမည်ကြီးပြီး လူတိုင်းဆော့တဲ့ ဂိမ်းက Counter-Strike ပါ... Clan တွေဖွဲ့ကြ၊ ပြိုင်ပွဲတွေလုပ်ကြနဲ့ အကြီးအကျယ်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ဂိမ်းပါ... အခုတော့လဲ ဂိမ်းဆိုတာ DotA ကိုပြောတာလို့ ပြောရမလို DotA (Defense of the Ancients) ခေတ် ရောက်နေပြန်ပါပြီ... ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံး ဘယ်ဂိမ်းဆိုင်ကြည့်လိုက် ကြည့်လိုက် ခုတ်ဟ ထစ်ဟ နဲ့ အားကြိုးမာန်တက် ဆော့နေကြတာ DotA ပါ... လူငယ်တွေ… Continue
Added by Ei Maung on June 27, 2009 at 5:30pm —
Thanks to Hollywood, black hat hackers have become the iconic image of all hackers around the world. For the majority of computer users, the word hacker has becomeasynonym for social misfits and criminals.
Of course, that is an injustice created by our own interpretation of the mass media, so it is important for us to learn whatahacker is and whatablack hacker (or cracker) does. So, let's learn about black hat techniques and how they make our lives a… Continue
Added by Min Min on June 23, 2009 at 9:48pm —
ကျွန်တော်နှင့် အမှိုက်သိမ်းသမား (သို့) ခေတ်ပေါ် programming languages တွေမှာ မ၀င်ဆံ့သေးတဲ့ ကျွန်တော်
Garbage Collector ဆိုတော့ “အမှိုက်သိမ်းသမား” လို့ဘဲ တိုက်ရိုက်ဘာသာ ပြန်လိုက်တယ် :) အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းဘဲ၊ garbage collector ဆိုတာ ခေတ်ပေါ် programming language တွေထဲမှာ သူမပါရင် မပြီးဘူးလေ။ Java စပေါ်တုန်းကလဲ garbage collector ဘယ်လောက်ကောင်းကြောင်း၊ programmer တွေအတွက် ဘယ်လောက်သက်သာကြောင်း ဆိုပြီး သူအကြောင်းတွေ ချီးမွန်းရင်း C programmers တွေကို advertise လုပ်ခဲ့တာလေ။ C မှာလို pointer တွေ delete လုပ်ရတဲ့ ကိစ္စ၊ နောက် pointer တွေကြောင့်ဘဲ memory leak ဖြစ်တဲ့ ပြသနာ၊ access violation ဖြစ်တဲ့… Continue
Added by Myint Kyaw Thu on June 19, 2009 at 4:28pm —
22-July - Total Eclips and Earth Quake - HOAX ?
Britton LaRoche ဆိုသူ သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ဦးက ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၈ ရက်နေ့မှာ တင်ထားတဲ့ Japanese Quake and Tsunami Predicted July 22 2009 ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ တင်ထားတဲ့ post တစ်ခုကြောင့် တော်တော်လေး လှုပ်လှုပ်ရှားရှားတွေ ဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်။ ဒီသတင်းဟာ တော်တော်ကြီးနေပေမဲ့လဲ ဘယ်သူမှ ဖြစ်မယ်/မဖြစ်ဘူး အတိအကျ မပြောနိုင်တဲ့ အတွက် စိတ်ဝင်စားစရာလဲ ဖြစ်နေပါတယ်။
ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လဲ ဖြစ်ချင်စရာပါ၊ အဲဒီ ဇွန်လ ၂၂ ရက်နေ့ မှာ နေအပြည့်ကြတ်မှာကို… Continue
Added by Win Naing on June 18, 2009 at 9:30am —
17 Days with ASP.NET 2.0 Website Programming...
Ok, this is how it is started. I've been maintainingawebsite foraBuddhist temple in Oxford for more thanayear. I didn't develop it, and I am merely updating the contents when it is necessary. It is always at the back of my mind that it would be nice to change it to the content management system, so anyone who has admin right can change the contents without my involvements. But it has been dragging too long, 6months precisely. Even though I know that it has to be changed, I pretended to be… Continue
Added by Pyay Nyein on June 18, 2009 at 4:55am —
FOLDER OPTOINS ပျောက်နေလျင်
၁) Start-Run ကိုနှိပ်ပါ။
2) Run Box ထဲတွင် “regedit” လို့ ရိုက်ပြီး Enter နှိပ်ပါ။
၄) ၎င်းတွင် Nofolderoptions ကို right-click-properties-modifyကိုနှိပ်ပါ။
Value data box တွင် “0” ကိုထည့်ပါ။ပြီးလျှင်ok နှိပ်ပြီး registry ထဲက
ထွက်ပါ။Restart ချပါ။Windows ပြန်တက်လာလျှင် folder options ပြန်
ပေါ်လာပါလိမ့်မည်။ Added by hsipawtar on June 17, 2009 at 3:40pm —
DISK DRIVE OPEN လို့မ၇ပါက
Localdisk ကို double click နှိပ်သော်မပွင့်ပါက virus ဝင်နေ၍ဖြစ်သည်။၎င်း
virus သည်autorun.inf ဆိုတဲ့ file ကိုdrive တိုင်း၏root directoryအောက်
system file ဖြစ်ရုံမက၎င်းvirus သည်folder options ကိုလည်းdisabled လုပ်
၁) start-run သို့ သွား၍cmd လို့ ရိုက်ပြီးenter နှိပ်ပါ။command prompt ပွင့်
လာပါမည်။drive c: အတွက်
၂) command promt တွင် cd\_ လို့ ရိုက်ပါ။
၃) attrib –r –h –s autorun.inf… Continue
Added by hsipawtar on June 17, 2009 at 1:52pm —
CD-ROM DRIVE ပျောက်လျှင်
CD-ROM Drive ကို BIOS မှာတွေ့ ပြီး Windows ထဲတွင်မတွေ့ ပါကအောက်ပါ
နည်းအတိုင်းစမ်းကြည့်ပါ။၎င်းနည်းကို Windows xp နှင့် Windows Vista တွင်
၂) Run Box တွင် “regedit” လို့ ရိုက်ပါ။Registry Editor ပေါ်လာပါမည်။
၃) ၎င်းနောက် HKEY-LOCAL-MACHINE\_System\_CurrentControlSet\_Cont
၄) ၎င်းတွင် “upperfilters” နှင့် “lowerfilters” ကိုဖျက်ပါ။ Added by hsipawtar on June 17, 2009 at 1:36pm —
No Comments Your Suggestion!
Added by manawphyulay on June 14, 2009 at 2:38pm —
SIL မှ Padauk Unicode Font အသစ်ထွက်
ယခု အပါတ်တွင် အရေးပါသော မြန်မာ ယူနီကုဒ် font ဖြစ်သည့် Padauk အသစ်ကို SIL International မှ ဖြန့်ချီခဲ့သည်။ http://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?site_id=nrsi&id=Padauk တွင် download လုပ်ယုရန်။ ယခု version တွင် မည်သည့် feature အသစ်များ ပါမည် ဖော်ပြမထားသောလဲ bug fix update ဖြစ်လောက်သည်။ အရင် 2.4 သည်… Continue
Added by Okisan on June 14, 2009 at 10:00am —
Apple WWDC 09 Keynotes
ဒီနေ့ June 8 ရက် (မြန်မာစံတော်ချိန် june9ရက် နံနက် ၁ နာရီ) မှာ Apple ရဲ့ World Wide Developer Conference (WWDC 09) ကို San Fransisco မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့ ကျွန်တော်လဲ နေမကောင်းပေမယ့် Conference က အရေးပါတဲ့ ဖိုင်နယ် ဘောလုံးပွဲ တစ်ပွဲလို လက်လွတ်မခံနိုင်တာကြောင့် တိုက်ရိုက် သတင်းတွေကို track လုပ်… Continue
Added by Htoo Tay Zar on June 9, 2009 at 8:30pm —
အသုံးချ သင်္ချာပဲ သင်လာခဲ့ရတော့ algebra ကို 'အရှိ' ပဲလို့ ထင်ခဲ့တယ်။ သင်္ချာသမားတွေရဲ့ 'လုပ်ကွက်' မှန်းမရိပ်မိဘူး။ အဆင့်မြင့် သင်္ချာသမားတွေအတွက် algebra ဟာ rules တွေ laws တွေ (commutative, associative, etc) နဲ့ define လုပ်ထားတဲ့ system တစ်ခုသာဖြစ်တယ်။ rule တွေ ထုတ်ခြင်သလိုထုတ်ပြီး algebra system များကို လိုသလို တည်ဆောက် နိူင်သည့်သဘော။ ဒီလို ဖန်တီး တည်ဆောက် ထားတဲ့ system တွေက programming မှာ .NET framework လို Java API လို အလွန်အသုံးဝင်ပြီး ခက်ခဲ့တဲ့ ပြဿနာတွေကို လွယ်ကူစွာ ဖြေရှင်းနိူင်စေပါတယ်။ ဥပမာ… Continue
Added by Okisan on June 9, 2009 at 6:00pm —
အများစောင့်စားနေကြတယ့် iPhone အသစ်ကိုဒီနေ့မနက် San Francisco မှာပြုလုတ်တယ့် Apple WWDC 2009 မှာကြေညာလိုက်ပါတယ်။ ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တချို့မှန်ကန်ပေမယ့် တချို့အချက်တွေကတော့တကယ်ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။ မမှန်တာတွေကို အရင်ပြောရမယ်ဆိုရင် Apple logo မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖြစ်မယ်ဆိုတာ၊ ဖုန်းအနောက်ဖက်က ပလက်စတစ်အကြမ်းစားဖြစ်မယ်ဆိုတာ၊ ဖုန်းရှေ့ဖက်မှာ ကင်မရာပါမယ်ဆိုတာတွေ တစ်ခုမှမမှန်ပါဘူး။
iPhone အသစ်ကို iPhone 3G S လို့ခေါ်ပါတယ် S က Speed ကိုရည်ညွှန်းတာပါ။ Speed ဆိုတယ့်အတိုင်း performance မှာ iPhone 3G… Continue
Added by Jake on June 9, 2009 at 1:30pm —
ကျောင်းထွက်စ IT Professional လမ်းကြောင်း
၂။ English စာ မွတ်နေအောင် ကျင့်ထား။ မှန်ဖို့ ထပ် ရဲရဲ… Continue
Added by Okisan on June 8, 2009 at 9:00pm —
Apply "selection" to any HTML tag - EzyJSSelector
Thanks to the repliers.
Pls download it and try as your requirement.
Bug reports and modification suggestions are welcome.
Added by Moe Sweet on June 8, 2009 at 10:32am —
The Iceberg Secret
Developer ဒါမှမဟုတ် Project Manager တစ်ယောက်ယောက်အတွက် သိထားသင့်တဲ့ Secret တစ်ခု ရှိပါတယ်... အဲ့ဒီ Secret အကြောင်းလေး နည်းနည်း ပြောချင်ပါတယ်...
CEO တစ်ယောက်ယောက်က တွေးနေမယ်... "ကျွန်တော့် Development Team က ခုတစ်လော သိပ်မဟုတ်ဖူး... ကျွန်တော်တို့ ဒီ Project ကိုစခါစက သိပ်အဆင်ပြေတယ်... အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာပဲ Team က Prototype ထွက်လာပြီး အားလုံးအဆင်ပြေပြေအလုပ်လုပ်တယ်... ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ သူတို့အလုပ်လုပ်တာ နှေးလာတယ်... အစပိုင်းကလောက်… Continue
Added by Ei Maung on June 6, 2009 at 12:46pm —
အဲဒိကောင် ကျနော်ပါပဲ ခင်ဗျား။ ။
Added by Aung Kyaw Htin on June 3, 2009 at 8:50pm —
Wolfram Alpha New Answer Search Engine
၂၀၀၉ မေ လ ၁၅ ရက် နေ့ မှာ wolfram alpha ဆိုတဲ့ answer search engine တစ်ခု ကို Wolfram Research က နေ ထုတ် လိုက်ပါ တယ်။ ဒီ search engine ကို Stephen Wolfram ဆို တဲ့ professor ကြီး က နှစ် ၂၀ တိ တိ analyst လုပ် ပြီး အချိန် ယူ ခဲ့ ရ တာ ပါ။ data များ နှိုင်း ယှဉ် ခြင်း၊ math formula နဲ့ calculation အ တွက် တော် တော် အသုံးဝင် ပါ တယ်။ Dell DCS CS23-SH, QC HT 2.8 GHz computers, 4608 cores, 65536 GB of RAM super computers တွေ ကို အသုံး ပြု ထား တဲ့ အတွက် ကြောင့် search resulted time က တော့… Continue
Added by Nay Zaw Lin on June 1, 2009 at 6:00pm —